နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်ပြီး ၁၀ ရက်လောက်အကြာမှာ ပြင်ဦးလွင်က လူငယ်စာရေးဆရာ ကိုဟင်းရာတစ်ယောက် ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်ရောက်ချလာပါတယ်။ သူက အကြောင်းမရှိဘဲ ရန်ကုန်ကို မလာတတ်ပါဘူး။ မိဘနှစ်ဦးကို အဖော်ပြုနေရသူဖြစ်တာကြောင့် ညအိပ်ညနေခရီး ထွက်ခဲပါတယ်။
“ လူတွေ သိန်းနဲ.ချီပြီး သေကျေပျောက်ဆုံးနေရတဲ့ ကပ်ဆိုး၊ ဘေးဆိုးကြီးမှာ လူတိုင်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် တတ်စွမ်းသမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူမနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ဒီအတိုင်း ငုတ်တုတ် ထိုင်နေရတာ လိပ်ပြာမလုံ ဖြစ်ရတယ်ဆရာရယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆရာတို.နဲ. တိုင်ပင်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဘာတွေ လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားမယ်။ ဘယ်သွားပြီး ဘာလုပ်ရ လုပ်ရ လုပ်ဖို. ရည်ရွယ်ပြီး ဆင်းလာခဲ့တာပဲ ” ကိုဟင်းရာက စိတ်အားထက်သန်စွာ လာရင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြပါတယ်။ အမေ လူထူ ဒေါ်အမာ တစ်နှစ်မှာ ခြောက်လလောက် ပြင်ဦးလွင်မှာ အပူရှောင်နေထိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး အနားမှာ လက်ကသုံးတောင်ဝှေး ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရုံမျှမက အမေမာဆီ ရောက်လာသမျှ ရပ်ဝေးရပ်နီး ဧည့်သည်မှန်သမျှကိုလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ. စေတနာ့ဝန်ထမ်းဧည့်လမ်းညွှန် လုပ်ပေးနေကျ လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝသူတစ်ဦးအနေနဲ. ငြိမ်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာ အံ့သြဖွယ်ရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါလူငယ်ရဲ. ဗီဇစိတ်ဓာတ်ပဲ ဖြစ်တယ်။ လူငယ်တိုင်းဟာ အများအကျိုးဆောင်ရွက်လိုစိတ် ရှိတယ်။ လိုအပ်ရင် ကိုယ်ကျိုးတောင်စွန်.နိုင်တယ်။
မုန်တိုင်းကြီးပြီးလို. လေးငါးရက်အကြာမှာပဲ စင်ကာပူရောက် တပည့်လေးတွေဆီက ပဏာမစုဆောင်းကောက်ခံရရှိလာတဲ့ အလှူငွေ ရောက်လာပါတယ်။ ရပ်ပိုင်းလောက်ခြားပြီးတော့ သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံများရောက် တပည့်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရောက်လာကြပါတယ်။ ဒီလူငယ်လေးတွေဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေ.မအား ညမအား ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်ရှာဖွေရရှိတဲ့ ချွေးနည်းစာလေးတွေနဲ. ပို.ပေးရှာကြတာပါ။ အချို.ဆို နိုင်ငံခြားရောက်နေတာ ဆယ့်လေးငါးနှစ်မကတောင် ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစိတ်ကတော့ မပျောက်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ဘယ်လောက်ကြာကြာ မြန်မာက မြန်မာပါပဲ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေသူတိုင်းကို အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းသူအဖြစ် ဘယ်သတ်မှတ်လို. ဖြစ်မှာလဲ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နေရင်းက ဒွေးတော်လွမ်းသူတွေ၊ နိုင်ငံခြားရူး ရူးနေသူတွေလည်း အများကြီးရှိနေတာ မဟုတ်လား။ တစ်နိုင်ငံလုံး ခြုံပြီး ကြုံတွေ.ရတဲ့ ဒီလို ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီး ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်သူတွေဟာ ကရုဏာတရားကြီးမားကြတယ်၊ ဘယ်သူတွေကတော့ ခေါင်းပါးကြတယ်ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်တွေ.နိုင်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာလူငယ်လေးတွေရဲ. စေတနာကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက တပည့်ဟောင်းတွေကလည်း ရနိုင်သမျှ ပစ္စည်းတွေ စုဆောင်းပြီး အခေါက်ခေါက်အခါခါ လေဘေးသင့်ရာအရပ်များကို သွားရောက်လှူဒါန်းကြပါတယ်။ ပြန်လာတဲ့အခါ သူတို.ဆီက ကြားရသမျှ သတင်းများကလည်း ရင်ဆို.စရာချည်းပါပဲ။
တစ်ခေါက်မှာတော့ သူတို.က ဒုက္ခသည်တွေက ။ထဘီမပါဘူးလား၊ ထဘီမပါဘူးလား၊ လို.ချည်း မေးကြတယ်။ ထဘီတွေ ရှာဝယ်ဦးမှ ဖြစ်မယ်လို. ပြောကြတယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ လှူသမျှလူတိုင်းက ပုဆိုးတွေ၊ အင်္ကျီတွေ၊ ဘောင်းဘီတွေချည်းလှူကြမှာ။ ထဘီကို ဘယ်စဉ်းစားမိမှာလဲ။ အဲဒါကြောင့် ထဘီတွေ ရှာပြီး ၀ယ်ခိုင်းရတယ်။ တော်ပါသေးရဲ.။ ထဘီတွေကို အထက်ဆင်တပ်ပြီးသား။ ချုပ်ပြီးသား ရောင်းကြတာတွေ ရှိနေပေလို.။ ယောကျာင်္းလုံချည်တွေချည်းပဲ ချုပ်ပြီးသားရှိတယ် ထင်တာ။ မိန်းမလုံချည်ပါ ချုပ်ပြီးသားရှိတာကိုး၊ ခေတ်ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်။ မိုးထဲ၊ ရေထဲ၊ ရွှံ.ထဲ၊ ဗွက်ထဲ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ. အခေါက်ခေါက်အခါခါသွားနေကြရပေမယ့် လူငယ်လေးတွေ မညည်းကြဘူး။ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားနေကြဆဲပါ။ လူငယ်တွေ အားလုံး ကိုယ့်အသိ၊ ကိုယ့်စေတနာနဲ.ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး လုပ်နေကြတာပါ။ တစ်ခါများ လူငယ်တွေ အားလုံး အင်္ကျီမပါ၊ ကျောဗလာနဲ. ပြန်လာကြတယ်။ ၀တ်စရာမရှိတဲ့ လူတွေအတွက် အင်္ကျီတွေချွတ်ပေးခဲ့ကြရလို.တဲ့လေ။ အာဂလူငယ်တွေပေပဲ။
အဆင့်မြင့်တဲ့ မြန်မာ့စိတ်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ထွက်သမျှ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း မုဒိတာပွားစရာ သတင်းဓာတ်ပုံတွေချည်း တွေ.နေရတယ်။ အမြို.မြို.အနယ်နယ်ကို သွားရောက်ပြီး လှူဒါန်းကူညီနေကြသူတွေထဲမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ၊ အဆိုတော်တွေ၊ လူရွှင်တော်တွေ၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်လုပ်သူတွေ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး။ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ဆရာဝန်လူငယ်ကလည်း ကိုယ့်အိတ်ထဲက ငွေထုတ်ပြီး သွားလှူကြတယ်။ သူတို.လှူတာသိတော့ တခြားဆရာဝန်တွေရော ဆရာဝန်မဟုတ်သူတွေပါ လာရောက်လှူဒါန်းထည့်ဝင်ကြတာကြောင့် သုံးလေးခေါက်လောက်တောင် သူတို.လှူနိုင်ခဲ့ကြပြီလို. သိရတယ်။ လူငယ်တွေသာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးလို။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးလို၊ ဓမ္မဒူတရှင်ဆေကိန္ဒလို ဆရာတော်တွေလည်း မနေနိုင်ရှာကြပါဘူး။ စားနပ်ရိက္ခာတွေ၊ အ၀တ်အထည်နဲ. အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ စောင် ခြင်ထောင်တွေ ကားကြီးတွေပေါ်တင်ပြီး တစ်ရွာဝင်တစ်ရွာထွက် လိုက်လံဝေငှနေကြပါတယ်။ ဒီလို သတင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ဖတ်ရ၊ မြင်ရ၊ ကြားရတဲ့အတွက် မုဒိတာ ပွားရသလို ကရုဏာနဲ. စေတနာ သဒ္ဓါတရားလည်း ပွားများရပါတယ်။ ဒါမြန်မာ့စိတ်ဓာတ်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပဲလို.လည်း ဂုဏ်တက်ရတယ်။ ဒီအတွက် ဂျာနယ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ရသေးတော့တယ်။
တစ်ရက်တော့ မိတ်ဆွေ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ဦး ရောက်လာပြီး လေဘေးဒုက္ခသည်တွေ အကြောင်း ပြောရင်းနဲ. ။ လူငယ်တွေ ဒုက္ခသည်တွေရှိရာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားပြီး လှူဒါန်းကူညီနေကြတာ ချီးကျူးမိပါတယ်။ လို. ပြောပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဒီကလေးတွေ ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။ သူတို.ရဲ. အလုပ်အကိုင် သဘောသဘာဝအရ လူသိထင်ရှား ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် ၀တ်စားပြောဆိုနေကြပေမဲ့ သူတို.လည်း မြန်မာပဲ။ ပြီးတော့ လူငယ်လေးတွေပဲ။ အများအကျိုးဆောင်လိုစိတ်မရှိဘဲ ဘယ်နေပါ့မလဲ။ လိုအပ်ရင် သူတို.လူငယ်တွေဟာ ကိုယ်ကျိုးစွန်.နိုင်ကြပါတယ်။ အနစ်နာခံနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါလူငယ်တိုင်းရဲ. သဘာဝပါ။ လူငယ်တွေဟာ ဘယ်ခေတ်မှ မညံ့ခဲ့ပါဘူး။
Weekly Eleven 4-6-2008 မှ
Posted by tg.nwai at 5:22:00 PM
Lables, လူထုစိန်ဝင်း၏ ဆောင်းပါးများ။